Trump ayaa aqbalay in Ruushka uu u dhacay doorashada Maraykanka, ayuu sheegay Reince Priebus - BBC Somali
Image caption Reince Priebus ayaa ah sarkaal sare oo ka tirsan shaqaalaha Donald Trump ayaa sheegay inuu Trump aqbalay warbixinta sirdoonka
"Waxaan u malaynayaa inuu aqbalay, waxa lagu helay warbixinta " ayuu madaxa shaqaala madaxtooyada ee xilka la wareegaysa, Reince Priebus, u sheegay Fox News.
Ruushka ayaa beeniyay eedeymaha inay ka danbaysay u dhicida emailada xisbiga Dimoqoraadiga si wax loogu dhimo Hillary Clinton.
Afhayeenka Kremlin Dmitry Peskov, ayaa sheegay maanta in eedeymaha dad lagu raadsanayo oo aysan lahayn wax cadayn ah.
Madaxweynaha la doortay ee Trump ayaa loo soo bandhigay waxyaabaha lagu helay warbixinta madaxda sirdoonka Jimcihii.
"Ma diidana in dad Ruush ah ay ka danbeeyeen ololahan gaarka ah," ayuu sheegay Mr Priebus Axadii.
Image caption Donald Trump ayaa shaki galiyay waxa lagu helay warbixinta hayadaha sirdoonka ee uu wax ka qoray Gen James Clapper (midig)